ठूलो स्थान युरोप मा मार्च मा भ्रमण गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > ठूलो स्थान युरोप मा मार्च मा भ्रमण गर्न
मटी छैन मार्च मा एक भाग्ने योजना ढिलो, को को अगाडी इस्टर भीड. बच्चाहरु संग छुट्टी मा रहेको, अब समय छ प्रियजनको साथ विचित्र साना टापुहरूको भ्रमण गर्ने मौका फेला पार्ने, पहिलो ठूलो मा प्रारंभ परिवार यात्रा साहसिक वर्ष को, संसारको सबैभन्दा जादुई शहर केही डुबाउनुहोस् वा मार्च मा धेरै युरोपेली चाडहरूमा एक धाउन. मार्चमा भ्रमण गर्न युरोपमा प्रशस्त ठाउँहरू छन्.
रूपमा उल्लेख, मार्च पनि युरोप मा तिहार मौसमको सुरुवातमा छ, त्यसैले संग प्रमुदित बनाउन अवसर को टन छन् स्थानीय, एक सिट्रस-प्रेरित मा यो हुन मेला दक्षिणी फ्रान्समा, वा लन्डन कफी महोत्सव मा.
मार्च मा भ्रमण गर्न युरोप मा ग्रेट स्थानहरू पत्ता लगाउन तयार? पढ्न!
युरोप मा ठूलो ठाउँ मार्च मा भ्रमण गर्न: लन्डन
तिनीहरूले भन्न, “a bad day in London is still better thanagood day anywhere else” so of course, लन्डन मार्चमा भ्रमण गर्न युरोपमा हाम्रो महान ठाउँहरूको सूचीमा हुनुपर्दछ.
मार्च भ्रमणको एउटा ठूलो महिना छ केंसिंग्टन महल उद्यान, Kew गार्डन, वा कुनै पनि लन्डनको अन्य हो शीर्ष बगैंचा, crocuses र daffodils को समुद्र राजधानी मार्फत ब्लूम रूपमा.
तपाईं धेरै शीर्ष गएर विचार छ भने आकर्षण, त्यसपछि हामी आफैलाई एक रही सिफारिश पर्यटक छुट कार्ड वा भ्रमण बस कम्बो टिकट. यी टिकट र बन्डलहरूको सकेजति तपाईंले केही गम्भीर पैसा बचत!
लन्डन कफी महोत्सव
हामी कफी को ठूलो प्रशंसक हुनुहुन्छ. हामी पनि अचम्मको बारेमा लेख्नुभएको कफी पसल यहाँ पहिले. त्यसैले, यहाँ अर्को युरोप मा हाम्रो महान् स्थानहरू मार्च मा भ्रमण गर्न को भाग रूपमा लेख्न छ – मार्च मा लन्डन कफी तिहार!
को 2019 बेलायत कफी हप्ताको देखि चल्छ 30-31 मार्च 2019. राष्ट्रको शीर्ष ब्यारिस्टा र कफीको उपभोक्ताहरू क्रीक मनाउन ईंट लेनमा सँगै आएका छन्. त्यहाँ हुनेछ भन्दा बढी 250 कालिगढ कफी र उम्दा खाना stalls, tastings र प्रदर्शन, अन्तरक्रियात्मक कार्यशालाओं, सडक खाना, कफी आधारित ककटेल, प्रत्यक्ष संगीत, डीजे, कला प्रदर्शनीहरू र यति धेरै.
थप थाहा र टिकट प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ टाउको: https://www.londoncoffeefestival.com
कोलोन लन्डन गाडिहरु गर्न
लण्डन अन्य वार्षिक मार्च घटनाहरू
वेल्श पार्टीहरूसँग वार्षिक सेन्ट दाऊदका दिन लण्डन उत्सव मा सामेल, खाना चाडहरूमा, र रग्बी. 1 Mar
मा प्यानकेकहरू वा crepes एक स्वादिष्ट थाक मा टक पैनकेक दिन (Shrove मंगलवार) लण्डन, वा पैनकेक दौड मा सबै पैनकेक-flipping कार्य पकड.5Mar
बाहिर एक दिन लण्डन आफ्नो आमा व्यवहार आमा दिवस. तिमी मजा प्रशस्त पाउन छौँ आमा संग गर्न कुराहरू, दिउँसो चाय सहित, नदी परिभ्रमण, किनमेल, र musicals. 31 Mar
नमूना नयाँ बियर, भठ्ठी पर्यटन उपस्थित, र अन्य साइडर संग mingle, बियर, तर, र लन्डन बियर सप्ताह मा लेजर प्रशंसकहरु. TBC
Maastricht लन्डन गाडिहरु गर्न
ब्रुग्स लन्डन गाडिहरु
Liege लन्डन गाडिहरु
लन्डन मार्च खेल घटनाहरू
विश्वभरिबाट नौकाविहार crews हेर्न मा लिन यो महिना थेम्स च्याम्पियनशिप कोर्स साथ एक राम्रो हेर्ने ठाउँ सुरक्षित नदी रेस को टाउको र महिला Eights नदी रेस को हेड. 16 र 30 Mar
को धावक सामेल वा को sidelines हेर्नुहोस् लन्डन स्थलहरु आधा म्याराथन वेस्टमिनिस्टर र लन्डन शहर मार्फत आफ्नो बाटो बतास रूपमा. 24 Mar
युरोप मा थप महान् स्थानहरू मार्च मा लण्डन भ्रमण गर्न, मा एक नजर हाम्रो घटनाहरू पात्रो र guide you to के लण्डन मा छ. र संग लन्डन चरण को सबै भन्दा राम्रो पकड हाम्रो थिएटर पुस्तिका.
युरोप मा ठूलो ठाउँ मार्च मा भ्रमण गर्न: स्विट्जरल्याण्ड मा जर्मेट
तपाईं अझै शीतकालीन चिसो अधिक हुनुहुन्न भने, त्यसपछि जर्मेट मा स्विट्जरल्याण्ड हिउँ फेला राम्रो शर्त छ. सबैभन्दा प्रसिद्ध मध्ये एक मा रिसोर्ट्स युरोप, को पाउडर पनि को अन्त सम्म सामान्यतया राम्रो छ अप्रिल.
जर्मेट गरेको अधिकांश रूपमा स्की क्षेत्र माथि निहित 2000 मीटर, यो स्किइङ वसन्त आउँदा त्यहाँ हिउँ कुनै कमी छ. बरफ सहरमा patchy हुन सक्छ. तथापि, पहाड माथि, तपाईं केहि फरक पाउनुहुन्छ. ताजा हिउँ, Untouched ट्रयाक, र आनन्द प्रशस्त छन् पत्ता प्रतीक्षामा. गर्नको लागि ताजा हिउँ को पूर्ण क्षमता अनुभव, अझै पनि सुरक्षित रहन गर्दा, केही बन्द-piste स्किइङ लागि स्की पुस्तिका किराया.
जर्मेट मात्र साहसिक लागि भोक ती अपील गर्दैन, तर यो पनि धेरै ती कम adventurous प्राण लागि केही अद्भुत गतिविधिहरु छ. जर्मेट मा जाडो Wandering को बीचमा हुन मानिन्छ सबैभन्दा क्षेत्रमा सुंदर. सबै को नक्शा जाडो hikes को जर्मेट पर्यटन वेबसाइटमा पाउन सकिन्छ. त्यहाँ एक पुस्तिका लागि कुनै आवश्यकता छ, रूपमा ट्रेल्स राम्रो मार्क, groomed, र सुरक्षित.
युरोप मा ठूलो ठाउँ मार्च मा भ्रमण गर्न: पूर्वोत्तर, हल्याण्ड
तपाईं लण्डन उद्यान भ्रमण गर्नुभएको छ भने फूल हेर्न, किन प्रवृत्ति जारी गर्न? हल्याण्ड एक रेल पकड! हल्याण्ड गरेको वार्षिक Tulip ब्लूम प्रत्येक वर्ष यात्री हजारौं आकर्षित गर्ने एक घटना छ. र राम्रो कारण लागि! मार्च तपाईं भीडलाई सम्झना गर्न निश्चित हुनेछ रूपमा भ्रमण गर्न एक महान समय छ. यो तुलिप्स आफूलाई अझै रूपमा देखा हुन सक्छ मतलब. तपाईं अझै पनि हिउँ सफेद को एक शानदार शो आनन्द उठाउन सक्छौं, daffodils, र भव्य गुलाबी र बैंगनी जलकुंभी. पछिल्लो मार्च र अप्रिलको बिचमा मार्जिनमा देखा पर्छ. को पाठ्यक्रम, मौसम अवस्था वर्ष भिन्न, त्यसैले यसलाई परामर्श गर्न सबै भन्दा राम्रो छ राष्ट्रलाई गरेको समर्पित Tulip वेबसाइट साप्ताहिक फूल अद्यावधिक लागि, जो मार्च मा सुरु.
बचत एक ट्रेन प्रयोग गरेर आफ्नो अर्को रेल यात्रा बुक
युरोप मा ठूलो ठाउँ मार्च ब्लग पोस्ट मा भ्रमण गर्न, तपाईं विश्वस्त? किन लिन3मिनेट र एक रेल टिकट पाउन saveatrain.com. तपाईं यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ कि मिति र समय भर्नुहोस् र हामी सबै भन्दा राम्रो मूल्य तपाईंको यात्रा को लागि प्रदान गर्नेछ, र तपाईं धेरै तरिकामा तपाईंको रेल यात्रा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgreat-places-europe-march%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#मार्च #Marchtraveleurope europetravel वसन्त trainjourney रेल यात्रा ट्रेवलहोलैंड travelnetherlands uktravel